Ukusika-i-Edge Technologies -CESE2 (Thailand) CO., LTD
IZiko leTekhnoloji ye-BIM linamava atyebileyo ekwakheni imodeli ye-BIM, ukuyila imizobo yokwakha ngokusebenzisa isoftware ye-BIM, ukubona ukungqubana kombhobho kunye nokuncedisa kufakelo lwesiza nokwakha, ikwasebenza kwitekhnoloji ye-BIM ekuphunyezweni nasekulawulweni kweeprojekthi ezinkulu , ezinje ngolawulo lwezixhobo ezincedisayo, ukuqikelela iindleko, ukulinganisa ulwakhiwo kunye nokuzimisela kwezicwangciso, iindawo esele zenziwe, kuphucula kakhulu umgangatho weprojekthi.
Ngokunyuka kwetekhnoloji yokulinganisa yekhompyuter, ukulinganisa ukuhambisa umoya kwigumbi elicocekileyo kuye kwavela njengetekhnoloji yokusika kwicandelo lokwakha lobunjineli. Iqela lobuchwephesha leCFD liqhube ulinganiso lwe-analogue kusasazo lomoya ohlukeneyo, amaqondo obushushu kunye nokufuma kobume obungaguquguqukiyo nobuguqukayo bendawo ecocekileyo yangaphakathi ngokwamkela isoftware yeCFD, kwaye yenze inkqubela phambili, inikezela ngenkxaso yobuchwephesha kwintengiso kunye noyilo lweHVAC.
Ukuqinisekiswa kwe-GMP likhonkco elibalulekileyo kumzi-mveliso wamayeza ukuze ufumane iphepha-mvume lokusebenza emva kokugqitywa kweeprojekthi. Njengokukhutshwa kwenguqulelo entsha ye-GMP kunye nemigangatho esemgangathweni ye-GSP, i-China iwuqinisile ummiselo kunye nolawulo lwayo kwiziyobisi, kwaye kunzima ngakumbi kwimizi-mveliso yamayeza ukupasa ukuqinisekiswa kwe-GMP. Ukubonelela ngeenkonzo ezingcono kwimizi-mveliso yamayeza, inkampani yamisela iziko lokuqinisekisa i-GMP ukubonelela ngeenkonzo zokuqinisekisa kwimizi-mveliso yamayeza, kwaye ibancede ukuba bapase ukuqinisekiswa kweGMP ngokutyibilikayo.